Tag: yekutaurirana fomu | Martech Zone
Tag: fomu rekubatana
Svondo, Gunyana 19, 2010 Chishanu, June 19, 2015 Douglas Karr
Nezuro, ndakave nemufaro wekuita musangano neRegional National Speakers Association, inotungamirwa naKarl Ahlrichs. Kune vatauri veveruzhinji, zvakakosha kuti uve nehupamhi hwewebhu uye ruzhinji rwevapowo vakashamisika kuwana maburi makuru mune yavo zano. Zvizhinji izvi ndezvekuti iyo indasitiri yachinja zvakanyanya… uye mazhinji masangano haana kuramba akadaro. Kana iwe ukangoisa webhusaiti, zvinoita sekuvhura chitoro mu
Mimwe yemhinduro dzandakagamuchira kubva kune vaverengi ndeyekuti ini ndanga ndisiri kupa yakawanda mhinduro nezve kubloga pa Martech Zone. Saka - nhasi ndafunga kuti ndingatora imwe nzira uye ndotarisa tekinoroji yakatenderedza chirongwa chako cheblogging kuti upe vaverengi runyorwa rwezvinhu zvekutarisa uye kuona kuti yavo blog ine. Robots.txt - Kana iwe ukaenda kumudzi (base kero) yedomain yako, wedzera robots.txt kukero.